Ịdenye ngwungwu kama ịnọrọ n'ịkekọrịta akụ na ụba ga-abụ usoro 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ịdenye ngwungwu kama ịnọrọ n'ịkekọrịta akụ na ụba ga-abụ usoro 2022
Mgbe akụ na ụba nkekọrịta ihe dị n'oge ọ bụ nwata, ndị na-enye ọrụ dị ka Airbnb wetara ọhụụ ọhụrụ na ọnụnọ, na-emesi ike na nnwere onwe na onye ọ bụla. Mana ụlọ oriri na ọṅụṅụ ejidela, na-elekwasị anya n'iwu ndị na-adịghị ahụkebe, dị ka nbanye n'oge, nleba anya n'oge na ebe ndị mmadụ na-enwechaghị ihe.
Ndị na-eme ezumike nke afọ na-abịa ugboro anọ ka ha ga-ahọrọ maka nchekwa nke ezumike ngwugwu karịa ịhọrọ nhọrọ nkekọrịta akụ na ụba, na-ekpughe nchọpụta e wepụtara taa Monday 1 November) site na WTM London.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ (32%) nke ndị na-eche maka ezumike esenidụt na 2022 yikarịrị ka ha ga-ede akwụkwọ ezumike ngwugwu, ma e jiri ya tụnyere 8% ndị ga-ede akwụkwọ site na saịtị nkekọrịta akụ na ụba, dị ka Airbnb, na-ekpughe akụkọ WTM Industry Report, nke gbara ajụjụ ọnụ. 1,000 ndị ahịa UK.
Ndị na-eme ezumike sitere n'akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ, gụnyere North Wales ma ọ bụ North East, na-ekwu na ha agaghị ede akwụkwọ nhọrọ akụ na ụba nkekọrịta, ebe ndị nọ na South West (21%), Greater London (14%) na Yorkshire na Humber ( 13%) bụ ndị o yikarịrị ka ịde akwụkwọ ọnụnọ Airbnb.
Ịkekọrịta akwụkwọ ndekọ akụ na ụba mụbara 73% n'etiti 2013 na 2014, na amụma PwC nwere ike ịkọ maka 50% nke ebe obibi ezumike site na 2025. Otú ọ dị, enweela nchegbu ogologo oge na ụlọ ọrụ njem banyere ịkekọrịta ụkpụrụ akụ na ụba, na mgbe ahụ-Chairman ABTA, Noel Josephides, na-ewelite okwu a afọ 15 gara aga.
Ndị na-enye ebe obibi akụ na ụba na-ekerịta mmụba na ntinye akwụkwọ na mmalite nke ọrịa a ka ndị njem na-ezere ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka ụlọ nkeonwe. Mana ụfọdụ na-ekwu na ụdị dị iche iche COVID ahụla akwụkwọ ntinye akwụkwọ na-agbada n'oge na-adịbeghị anya, ebe Airbnb na-atụ anya na ntinye akwụkwọ adịghị ike yana ịdọ aka ná ntị 2021 ga-anọ n'okpuru ọkwa 2019.
Ka ọ dị ugbu a, nchicha na mgbanwe mgbe niile nke usoro ọkụ okporo ụzọ gọọmentị UK mere ka ọ pụta ìhè uru dị n'itinye ezumike ngwugwu ATOL echedoro site na ụlọ ọrụ a ma ama, na ọtụtụ ndị ọrụ na ndị ọrụ na-agbanwe ụkpụrụ iwu iji nyekwuo ohere maka ndị na-eme ezumike na-achọ ịgbanwe. ruo ebe dị iche ma ọ bụ ụbọchị.
Iji gbochie ọdịda ahụ - yana ijikwa usoro ọrụ-site na ebe ọ bụla, Airbnb wepụtara atụmatụ 'Live Anywhere on Airbnb' na June, na-enye otu afọ nke ọnụnọ n'efu, maka ndị ọrụ na-ekerịta ahụmịhe ha. Ọ na-abịa dịka onye na-eweta ebe obibi kwuru na ọnụnọ nke ụbọchị 28 ma ọ bụ karịa abawanye na nkeji mbụ nke 2021.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: “Obi abụọ adịghị ya na oria ojoo COVID enweela mmetụta na nhọrọ ndị mmadụ na ụdị ebe obibi ha nwere ntụsara ahụ nke ọma, yana ụlọ ọrụ ezumike ngwugwu na-akwalite uru nke nchekwa ATOL na ntinye akwụkwọ na-agbanwe agbanwe, n'agbanyeghị na ọ dị mma ikwu. Mmasị nke Airbnb na-enyekwa mgbanwe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ndị mmadụ gbanwee obi ha.
"Mgbe akụ na ụba nkekọrịta ihe dị na nwata, ndị na-enye ọrụ dị ka Airbnb wetara echiche ọhụrụ na ọnụnọ, na-emesi ike na nnwere onwe na onye ọ bụla. Mana ụlọ oriri na ọṅụṅụ ejidela, na-elekwasị anya n'iwu ndị na-adịghị ahụkebe, dị ka nbanye n'oge, nleba anya n'oge na ebe ndị mmadụ na-enwechaghị ihe.
"Ọzọkwa, ọtụtụ ebe ndị na-ekekọrịta akụ na ụba na-eme nke ọma bụ n'ebe ndị njem na-ewu ewu nke ukwuu ebe enwere ụkọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọdịnala. Mana, nyere na COVID emechiela ọtụtụ ụwa n'ime ọnwa 18 gara aga, nke ahụ abụghị nsogbu ugbu a.
"N'ikpeazụ, mgbe a gwara anyị ka anyị nọrọ n'ime ụlọ ọnwa ole na ole, ihe ka ọtụtụ n'ime anyị na-agwụ ike n'ịzụ onwe anyị, n'ihi ya, echiche nke idebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe a na-ahọrọ nri ọhụrụ na nke na-akpali akpali, nke onye ọzọ sie ya, na-amasị ya n'ezie. anyị bụ ndị chọrọ ka onye ọzọ chere ha izu ole na ole."